Huawei - Ascend P7 - ဟန်းဆက်များ - အသုံးပြုသူ လမ်းညွှန်	Corporate
မူလစာမျက်နှာ > ဟန်းဆက်များ > Ascend P7
Ascend P7 အကူအညီ
ကောင်းမွန်သာလွန်မှုများဖြင့် Huawei Ascend P7 <Title end>
Ascend P7 ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ထုတ်လုပ်ထားပြီး နောက်ဆုံးပေါ်လုပ်ဆောင်ချက်များ၊ လျင်မြန်သော ဆက်သွယ်မှုကွန်ယက်များ လှပသောဒီဇိုင်း စသည်တို့သည် ၎င်း၏အဆင့်အတန်းကို ဖော်ညွှန်းပြသနေပါသည်။ <Content end>
၇လွှာပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်း တည်ဆောက်ထားမှု <Title end>
Ascend P7 နောက်ပိုင်းကို မှန်၇လွှာဖြင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားသဖြင့် စမတ်ဖုန်းလောကကို အထူးအဆန်းဖြစ်စေပြီး အနုစိပ်လှသော သေသပ်သော ဒီဇိုင်းကိုလည်းတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါသည်။ ယခုလိုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှုက ပိုမိုလှပသော ဒီဇိုင်းကို ဖြစ်စေပြီး တီထွင်ဆန်းသစ်နိုင်မှု ကိုလည်းပြသလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ <Content end>
ပါးလွှာသော ဒီဇိုင်း <Title end>
သင် Ascend P7 ကို ကောက်ယူလိုက်သည်နှင့် ၎င်း၏ပါးလွှာမှု ဒီဇိုင်းကို သင်သတိပြုမိမှာ ဖြစ်ပါသည်။ အထူအားဖြင့် ၆.၅မီလီမီတာ သာရှိပြီး မမျှော်မှန်းနိုင်သော မျှော်လင့်မထားသော ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့် ဒီဇိုင်းလည်းဖြစ်ပါသည်။ သင်အသုံးပြုလိုက်သည်နှင့် Ascend P7 သည် စမတ်ဖုန်းလောကကိုအတွေ့အကြုံသစ်များစွာ ယူဆောင်လာသည်ကို တွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါသည်။ <Content end>
ပါဝါ ခလုတ်ကို ဆန်းသစ်တီထွင်ထားခြင်း <Title end>
ပါဝါ ခလုတ်ကို ဒီဇိုင်းတခုအနေဖြင့် ဆန်းသစ်တီထွင်ထားပါသည်။ သုံး၍ပိုမိုအဆင်ပြေစေရန် ရည်ရွယ်ထားသလို အသုံးပြုသူအနေဖြင့် လက်တဖက်တည်းဖြင့်အသုံးပြုရာတွင်လည်းအဆင်ပြေစေရန် ရည်ရွယ်၍ ခလုတ်၏နေရာကို အလယ်တင်ထားရှိပေးထားပါသည်။ <Content end>
ထောင့်ချိုးထောင့်ကွေးများကို ရေစက်ပုံသဏ္ဍာန် ဒီဇိုင်းထွင်ထားခြင်း <Title end>
Ascend P7 သည် သင်တွေ့ဖူးသမျှ စမတ်ဖုန်းများနှင့် မတူဘဲ အသွင်တမျိုးကွဲပြားနေပါလိမ့်မည်။ ဖုန်းအောက်ဘက်ထောင့်ကွေးများကို ရေစက်ပုံစံ ဒီဇိုင်းချ တီထွင်ထားပြီး ရလဒ်အနေကတော့ ကိုင်တွယ်အသုံးပြုရမှာ ချောမွေ့လွယ်ကူစေပြီး သင်ကြိုက်နှစ်သက်မှာ သေချာပါသည်။ <Content end>
8MP BSI လုပ်ဆောင်ချက်ပါသော ရှေ့ကင်မရာ <Title end>
Ascend P7သည် ကင်မရာအတွက်လည်း အသစ်သစ်သော လုပ်ဆောင်ချက်များကို သယ်ဆောင်လာသလို Blue Glass infrared sensor သည် ရိုက်ယူသမျှသော ပုံရိပ်များကို ကြည်လင်ပြတ်သားမှုကို ပေးမှာဖြစ်ပါသည်။ <Content end>
မြင်ကွင်းကျယ်စတိုင်လ် ကိုယ်တိုင်ရိုက်ပုံရိပ်များ ရိုက်ကူးနိုင်ခြင်း <Title end>
Ascend P7 ၏တီထွင်ဆန်းသစ်မှု အသစ်ဖြစ်သော မြင်ကွင်းကျယ်စတိုင်လ် လုပ်ဆောင်ချက်သည် သင့် ကိုယ်တိုင်ရိုက်ပုံရိပ်များကို ထောက်ပံမှုကောင်း တခုဖြစ်လာမည်ဆိုသည်မှာ သေချာပါသည်။ ဒါကြောင့်မို့ သင်ဘာပဲလုပ်လုပ် သင်ဘယ်ပဲသွားသွား သင့်ဘေးရှိ အရာများကို သင်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်၍ ရိုက်ကူးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါသည်။ <Content end>
13MP ရှိ နောက်ကင်မရာ <Title end>
13MP ရှိ Ascend P7၏ နောက်ကင်မရာတွင် photosensitive f/2.0 aperture 5-piece ISP lens နှင့် BSI sensor များပါဝင်သောကြောင့် နေ့ဘက်ပဲဖြစ်စေ ညဘက်ပဲဖြစ်စေ သင် ရိုက်ကူသမျှသော ပုံရိပ်များ၏ ရုပ်ထွက်များကို ပိုမိုကောင်းမွန် ကြည်လင်ပြတ်သားမှုရှိအောင်ပြုလုပ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါသည်။ ဗီဒီယိုရိုက်ကူးရာတွင်လည်း ကောင်းမွန်စေမှာ ဖြစ်ပါသည်။ <Content end>
အလင်းအားနည်းသောချိန်တွင်ရိုက်ကူးချက် <Title end>
Ascend P7 သည် အလင်းအားနည်းသော အချိန်တွင် ရိုက်ကူးနိုင်ရင်အတွက်လည်း ရှေ့နှင့်နောက် ကင်မရာများတွင် လုပ်ဆောင်ချက်များ ထည့်သွင်းထားပါသည်။ <Content end>
လျင်မြန်သော စနက်ရှော့တ် <Title end>
လျင်မြန်သော စနက်ရှော့တ် ရိုက်ကူးချက်သည်လည်း Ascend P7 တွင်ထည့်သွင်းထားပါသည်။ ၁.၂စက္ကန့်အတွင်း လျင်မြန်စွာရိုက်ကူးယူနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။ <Content end>
ပုံ့ရိပ်များကို ပြုပြင်နိုင်သော လုပ်ဆောင်ချက် <Title end>
သင်ရိုက်ယူထားသော ပုံရိပ်များကို ပြုပြင်နိုင်သော လုပ်ဆောင်ချက်လည်း ပါဝင်ပါသည်။ <Content end>
Ascend P7 သည် 4G LTE ကွန်ယက် နှင့်ဝေးသော နေရာတွင်ရောက်ရှိနေပါကလည်း သင့်ဘတ္ထရီ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို ချွေတာသောအားဖြင့် 3G ကွန်ယက်ကိုအလိုအလျောက် ချိတ်ဆက်၍ အသုံးပြုပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။ <Content end>
အင်တာနာ နှစ်ခုပါဝင်ခြင်း <Title end>
အပေါ်နှင့်အောက် နှစ်ဘက်စလုံးတွင် အင်တာနာ တခုစီ ပါဝင်သောကြောင့် လိုင်းဆွဲအားကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေမှာ ဖြစ်ပါသည်။ ဒါကြောင့်မို့ နေရာမရွေးကို ပျော်ရွှင်စွာ သင်သယ်ယူသွားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါသည်။ <Content end>
ဘတ္ထရီစွမ်းအင်ချွေတာခြင်း <Title end>
အားကုန်တော့မှာလား? စိတ်မပူပါနဲ့ . . . သင့် Ascend P7တွင် အားကုန်ခါနီး ၁၀%အချိန်တွင် ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း စာပို့ခြင်း စသည့် အရေးကြီး လုပ်ဆောင်ချက်များကိုချန်ထား၍ ကျန်လုပ်ဆောင်ချက်များအားလုံးကို ပိတ်ပေးပြီး စွမ်းအင်ချွေတာစေမည့် လုပ်ဆောင်ချက်ပါဝင်ပါသည်။ ၎င်းလုပ်ဆောင်ချက်သည် သင့်ကို ၂၄နာရီကြာထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါသည်။ <Content end>
စမတ်ပါဝါ လုပ်ဆောင်ချက် <Title end>
Huawei Ascend P7 တွင် ဘတ္ထရီလုပ်ဆောင်ချက်ကို Normal, Smart နှင့် Ultra ဟူ၍ ပုံစံ ၃မျိုးရှိသောကြောင့် သင့်စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ်အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါသည်။ <Content end>
Thermal Gel အအေးခံစနစ်အသုံးပြုထားခြင်း <Title end>
Thermal Gel အအေးခံစနစ် ကို အသုံးပြုထားသောကြောင့် စီပီယူ ကို ပိုမို အေးစေပါသည်။ ဒါ့အပြင် ပါဝါအလွန်စားသော ဂိမ်းများ ကစားရာတွင်လည်း အပူချိန်တက်လာခြင်းမရှိဘဲ သင့်လက်ကိုအေးမြနေစေမှာ ဖြစ်ပါသည်။ <Content end>
Ascend P7 ဒီဇိုင်းသည် သင့်အတွက် လွယ်ကူမှုများကို သာ သယ်ဆောင်လာပေးပါသည်။ Phone Manager လုပ်ဆောင်ချက် သည်လည်း သင်အတွက် ကောင်းမွန်မှု တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါသည်။ <Content end>
အမြင့် ၁၃၉.၈ မီလီမီတာ
အကျယ် ၆၈.၈ မီလီမီတာ TR end
အထူ ၆.၅ မီလီမီတာ TR end
အလေးချိန် ၁၂၄ ဂရမ်ခန့် TR end
Memory(မှတ်ဉာဏ်) Content start
နောက်ကင်မရာ: 13MP AF BSI F2.0, with Flash
ရှေ့ကင်မရာ: 8MP FF Content end
အသံ Content start
အသံဖိုင် ပုံစံ: *.mp3, *.mid, *.amr, *.3gp, *.mp4, *.m4a, *.wav,*.ogg, *.ra Content end
Video(ဗီဒီယို) Content start
Eject tool×1 Content end